मासु कति खाने ? कसरी खाने ?
दसैं, तिहार, छठ र लोसार जस्ता चाडपर्वको बेला नेपालीहरुको भान्छामा विभिन्न परिकारका खानेकुरा पाक्छन । ती विभिन्न परिकार मध्ये प्रमुख मानिन्छ मासु । चाडपर्वको बेला नेपालमा मासुका विभिन्न परिकार बनाएर खाने चलन छ । तर मासु कति खाने ? कस्तो मासु खाने ? मासु खाँदा के–कस्ता कुरामा सावधानी अपनाउने ? भन्ने चेतना निकै कम भएको पाईन्छ नेपाली समाजमा । त्यसैले त चाडवाड लगत्तै मासुजन्य रोग लाग्नेहरुको संख्या पनि अधिक हुने गर्दछ हाम्रो मुलुकमा । चाडपर्वको बेला मानिसहरुले बढी मात्रामा खानपिन गर्ने भएकाले निरोगी मानिस समेत रोगी हुन्छन । झन दीर्घ रोग लागेकाले खानपिनमा ध्यान नदिँदा बिरामीलाई गम्भिर अवस्थामा अस्पतालमा पुर्‍याउनु परेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।
चिकित्सकहरुका अनुसार खानपिनमा सामान्य ध्यान नदिँदा दसैंको समयमा उच्च रक्तचाप, मुटरोग, मधुमेह र पेटजन्य समस्याका विरामीको संख्या हृवात्तै बढ्छ । त्यस्तै बजारमा पाइने अस्वस्थकर मासुका कारण तत्कालै टाइफाइड, झाडापखला, क्षयरोग, आउँ, पेट फुल्ने, मृगौलाको रोग, कोस्टल इन्फेक्सन, फुड पोइजनिङ आदि समस्या समेत देखिने गरेको छ ।
जनस्वाथ्य चिकित्सकहरुका अनुसार मासुको सेवनमा होसियारी नअपनाउने हो भने अस्वस्थ मासुकै कारण डेढ सय भन्दा बढि प्रकारका रोगको संक्रमणको खतरा रहन्छ । राम्रोसँग नपकाएको खण्डमा वा रोगी पशुपन्क्षिको बध गरेमा मासुको माध्यमबाट पशुपन्क्षीका रोगहरु पनि मानिसमा लाग्ने गर्दछ ।
मानिसमा लाग्ने पशुरोगहरुलाई जुनोटिक डिजिज भनिन्छ । मासुबाट लाग्ने परजीवी रोगहरुमा टेनियासिस, हाइडाटिडोसिस, सिस्टिसर्कोसिस, ट्राइचुनेलोसिस, इकानोकोकोसिस र नाम्ले जुका मुख्य हुन । यी सबै संक्रमण पशुको संक्रमित काँचो मासुका परिकारबाट मानिसमा सर्छन् ।
त्यस्तै बिषाणुजन्य रोगहरुमा बर्डफ्लु, खोरेत र रानिखेत पर्छन भने जीवाणुजन्य रोगहरुमा एन्थ्राक्स, बुर्सेलोसिस, बोभाइन एण्ड एभिएन ट्यूवरकुलोसिस, टाइफाइड फिवर, लेप्टोस्सपाइरोसिस, स्ट्रेप्टोकोकोसिस, स्टेफाइलोकोकोसिस पनि सर्न सक्छन् । प्रोटोजोवाजन्य रोगहरुमा भने टोकोसोप्लाज्मासिस, जियार्डीयोसिस, अमिबियोसिस, व्यालान्टिडियोसिस आदि रोग सर्ने सम्भावना अत्याधिक हुन्छ । यी बाहेक मासुजन्य पदार्थकै कारण दाद र लुतो पनि हुने संभावना हुन्छ ।
मासु धेरै सेवन गर्नाले मोटोपन बढ्ने र त्यसले शरीरमा एस्ट्रोजेन हर्मन बढ्ने गर्दछ । सो हर्मोनले क्यान्सरको खतरा बढ्ने अनुसन्धानहरुले प्रमाणित भएको छ । मासु खानेबित्तिकै आइसक्रिम, दुध, दही, क्रिमका परिकार खानु उपयुक्त हुदैन । बोसो तथा छालारहित मासुको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । चाडपर्वमा मासु बढी खाइने हुँदा यसले युरिक एसिड र मृगौलाका बिरामीहरुलाई सताउने गर्छ । प्रोटिनको अत्याधिक सेवनले मृगौला रोगमा हानी गर्ने हुनाले यस्ता रोगीलाई मासु कम खान सल्लाह दिइन्छ । मासुजन्य जुनोटिक रोगबाट बच्नको लागि मासुलाई राम्रोसँग पकाउनुपर्छ साथसाथै मासु खानको लागि भनि रोगि पशुहरुको बध गर्नु हुदैन । काँचो मासुको सेवन जुनोटिक रोग लाग्नुको प्रमुख कारण हो । मासुलाई १ सय डिग्रीभन्दा बढी तापक्रममा पकाउनुपर्छ ।
चाडवाडमा धेरै चिल्ला र फ्राइ गरेका खानेकुरा तथा माछामासु खाने चलन छ । हामीलाई स्वादिलो लागेपनि धेरै फ्राई गरेका खानेकुरामा पौष्टिक पदार्थ हुँदैन । तेल, घिउ खार्दा त्यसबाट विषालु पदार्थ जन्मन्छ र त्यस ले मुटुलाई निकै नै हानी पुर्‍याउँछ । त्यसैले यस्ता खारेका खानेकुरा खान हुँदैन । तेल, घिउको प्रयोग सकभर न्यून मात्रामा गर्नुपर्छ । त्यस्तै एकदिन पकाएको मासु धेरै दिनसम्म खाने चलन पनि छ । पकाएको खानेकुरा धेरै समयसम्म भण्डारण गर्दा दुषित हुने भएकाले यसले स्वास्थ्यलाई निकै नै बेफाईदा गर्छ ।
तसर्थ, एकपटकमा खाने जति मात्र पकाउने र जति पकाइन्छ त्यसको शुद्धतामा ध्यान दिने गर्नुपर्छ । एकै पटक धेरै मासु पकाएर धेरै दिनसम्म खाँदा त्यसबाट रोगलाई बढावा दिनेबाहेक अन्य केही पाइदैन ।
रातो मासु पोलेर, धेरै भुटेर वा तारेर खाँदा क्यान्सरको खतरालाई बढाउँछ । उच्च तापक्रममा मासु फ्राई गर्दा हेटेरोसाइकिल्क र पोलिसाइकिल्क जस्ता केमिकल निस्किने र उक्त केमिकलले क्यान्सरको जोखिम बढ्ने भएकाले दशैको मासु पकाउँदा सजक बन्नुपर्छ । मासुलाई धेरै भुट्ने, तार्ने वा पोल्ने भन्दापनि थोरै भन्दा थोरै तेल प्रयोग गरि सामान्य तरिकाले पकाउनु उपयुक्त हुन्छ । एकपटक प्रयोग गरिएको तेल अर्को पटक प्रयोग गर्नुहुँदैन ।
मासु पोल्दा र सुख्खा हुने गरी भुट्दा प्रयोग हुने दाउरा र ग्यासबाट हाइड्रोकार्बन उत्पन्न हुन्छ । जसले पेट, ठुलो आन्द्रा, प्रोस्टेट, कलेजो, फोक्सो र छाला जस्ता अंगहरुको क्यान्सर हुने जोखिम बढी रहन्छ । त्यस्तै मासु फ्राई गर्दा निस्कने तत्व एच.सी.ए. र पी.ए.एच.यस .ले मानव शरीरमा विभिन्न ट्युमरहरु पैदा हुन्छ । यसैको कारण पछिल्लो समयमा क्यान्सरको बिरामी नेपालमा बढीरहेको चिकित्सकहरु बताउँछन । सकेसम्म आँखाले देखिने चिल्लो वा बोसो निकालेर थोरै मात्र तेलको प्रयोग गरी पकाउनु राम्रो हुन्छ ।
मासु उमालेर खाएमा अरु बढी स्वास्थ्यवर्धक हुने गर्छ । मासुलाई बफ्याएर पकाउन सकिन्छ । मासुलाई सुख्खा किसिमले फ्राइ गरेर भाँडाको तल रहेको चिल्लो फालेर खान सकिन्छ । चिल्लो, पिरो तथा मसला कम हालेर पकाइएको मासु स्वस्थ हुन्छ । सकभर खसी, भेँडा, च्यांग्रा, पाडा, बंगुर आदिको रातो मासु भन्दापनि कुखुरा, हाँस, टर्की, बट्टाई, वा माछाको सेतो मासु खानु उपयुक्त हुन्छ । खासगरी, रातो मासुमा स्याचुरेटेड चिल्लो बढी हुने हुनाले त्यो मुटुको स्वास्थ्यको लागि घातक मानिन्छ । स्याचुरेटेड चिल्लोले कोलेस्टेरोलको मात्रा बढाउँछ, जसले रक्तप्रवाहमा अवरोध लगायतका समस्या उत्पन्न हुनसक्छन ।
सेतो मासुमा हानिकारक बोसो तथा कोलेस्ट्रोलको मात्र कम हुने कारणले गर्दा मुटुरोगी तथा मधुमेहका बिरामीहरुलाई समेत उपयुक्त हुन्छ । मुटुरोगी तथा मधुमेहका बिरामीले सकभर एकदमै न्यून मात्रामा सेतो मासु खानुपर्छ । यस्ता बिरामीलाई रातो मासु उपयुक्त हुदैन । क्यान्सरका बिरामीले खसीको मासु एकै पटक धेरै खानुभन्दा साधारण तरिकाले पकाएको थोरै मात्र प्रयोग गर्नु र पोलेको, डढेको वा धेरै भुटेको मासु भने खाँदै नखानु उचित हुन्छ ।
त्यस्तै, खानकीमा मासुसँग मदिरा मिसाउने चलन हामीकहाँ निकै पहिलेदेखि चलिआएको छ । मदिरा नपिउनेले फेन्टा, कोकजस्ता कोल्डड्रीङ्क्स पिउने गर्छन । एकदमै कम मात्रामा बाहेक मदिराले मानिसको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्दछ भने कोल्ड कोल्डड्रीङ्क्समा पाइने चिनीको मात्राले पनि स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने गर्छ । त्यसैले मासुसँगै पेय पदार्थ पनि स्वस्थ हुन जरुरी छ । पेय पदार्थको रुपमा दही, फ्रेस जुस आदि लिन सकिन्छ । मदिरा र कोल्डड्रीङ्क्सभन्दा पनि प्रशस्त मात्रामा पानि पिउने कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ । मधुमेह, प्रेसर, दम र ग्याष्टीकका बिरामीले मासु खाँदा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
मधुमेहका बिरामीले बढी चिल्लो मासु खानुहुदैन । प्रेसरका बिरामीले खाने मासु धेरै नुनिलो हुनुहुँदैन । मधुमेह र प्रेसरका बिरामीले मासुसँग मादक पदार्थ खाने गर्नुहुँदैन । जथाभावी मुख छाडेर खानेकुरा खाँदा हृदयघात पनि हुने सम्भावना भएकाले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । दमका बिरामीलाई चिसो खानेकुरा र पेय पदार्थ खाँदा असर पुर्‍याउँछ । ग्याष्टीकका बिरामीले दिनको चारपाँच पटक खानुपर्छ । सुगरका बिरामीले पनि पेटभरी खान हुँदैन । अड्कल गरी गरी खानुपर्छ । स्वस्थ मान्छेले पनि दिनमा तीनचार पटक गरेर खानुपर्छ । एकैपटक धेरै खान उचित हुँदैन ।
मासु र अन्य परिकारलाई स्वस्थकर ढङ्गले नराख्दा खानेकुरामा विषाक्तता बढी खाना प्वाइजनिक हुन पुग्छ र खाएको केही समयभित्रै पेट बटारिने, पेट ढुस्स पर्ने, झाडापखाला चल्ने, अपच भई तत्कालै पेट फुल्ने लगायतका समस्या देखिन्छ । नेपाल सरकारले २०५५ सालमै मासुको स्वस्थ्यता र गुणस्तर कायम राख्न, स्वच्छ व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्न, मासुबाट बन्ने खाद्यपदार्थमा मिसावट रोक्नको लागि पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन बनाएको त छ तर यी ऐन नियम लागू भएका छैनन । हुन त स्वच्छ मासुको महत्वलाई बुझ्दै आधुनिक बधशालाको चलन सुरु भने भएको छ ।
आधुनिक बधशालामा जनवारलाई दुख दिएर मारिदैन । उनीहरुलाई बेहोस बनाएर मारिने र रगतसँग पनि लसपस नगरिने हुँदा मासु स्वस्थकर मानिन्छ । नेपाल सरकारले पनि आधुनिक बधशालालाई प्राथमिकताका साथ लागु गर्न नयाँ ऐन नियम बनाएर कडाईका साथ लागू लाग्नुपर्छ । उपभोक्ताले ताजा र सफा मासु किन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । मासु काट्ने स्थान, काट्ने चक्कु तथा हतियार सफा राख्नुपर्छ । मासु काट्ने व्यक्तिले लगाउने पोशाक, काटेको तरीका र तराजु पनि सफा हुनुपर्छ । त्यस्तै मासु काट्ने अचानो पनि सफा राख्नुपर्छ । मासुको परिकार तयार पार्ने व्यक्ति (कूक) स्वस्थ हुनुपर्छ । पशुपन्छी वध गर्नेबित्तिकै पकाएर खानुहुदैन । बध गरेको अवस्थामै मासु किनेर ल्याउँदा पनि त्यसलाई ३ देखि ४ घण्टा डिपफ्रिजमा राखेर राम्ररी पकाउनु पर्छ । डिपफ्रिज छैन भने मनतातो पानीमा पखालेर मात्र पकाउनु राम्रो हुन्छ । पशुलाई धेरै हिँडाएर ल्याएको छ भने बध गर्नु अघि एकदुई दिन आराम गराउनुपर्छ । ठूलो पशु बध गर्नुपूर्व ६ देखि बाह्र घण्टाअघि दाना र घाँस रोकी पानी मात्र दिनुपर्छ । कुखुरालाई फिड सप्लिमेन्ट, हर्मोनतथा एन्टिबायोटिक दिएको ३ देखि ५ दिनपछि मात्र बध गर्नुपर्छ । मासु पसल शिसा राखेको, डिपफ्रिजको व्यवस्था तथा सकभर विजुलिवत्तिको वैकल्पिक व्यवस्था भएको, भेन्टिलेटर तथा धुलोरहित र अन्य घरपालुवा जनावरको सम्पर्करहित हुनुपर्छ ।
कुखुराको मासु किन्दा छाला निकालेर, कलेजो, फोक्सो, मलद्वारनली र अन्ननली फ्यालेर किन्नुपर्छ । यसो गर्दा छालामा डिपोजिट भएर बस्ने भ्याक्सिन, कलेजोमा डिपोजिट भएर बस्ने एन्टिबायोटिक तथा यसमा रासायनिक प्रतिक्रिया भएर बन्ने केमिकलको हानिवाट जोगिन सकिन्छ । त्यस्तै अन्ननली र मलद्वारनलीमा रहने व्याक्टेरियाको संक्रमणबाट बँच्न सकिन्छ । मासु किनेर खुल्ला नराख्नु उत्तम हुन्छ । उपलब्ध भए डिपफ्रिजमा राख्ने वा आगोको छेउछाउमा ठूलो भाँडोमा छोपेर राख्नुपर्छ । फ्रिजमा लामो समयसम्म भण्डारण गरेर राखिएको मासु सकेसम्म नखानु राम्रो हुन्छ । बासी तथा खुला स्थानमा राखेको मासु खानु हुदैन ।
मासुलाई अन्य पाकेका परिकारसँगै फ्रिजमा त्यतिकै राख्नु हुँदैन । ताजा मासुलाई २ देखि ४ डिग्री सेण्टिग्रेडमा फ्रिजमा ४८ घण्टासम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ । राम्रा फ्रिजिङका माध्यम पनि छन, जुन व्यावसायिक संस्थाहरूमा मात्र हुन्छन । मासुलाई फ्रिजमा राख्दा जहिले पनि छोपेर राख्ने गर्नुपर्छ र कहिले पनि माथिल्लो भागमा राख्नु हुँदैन । माथिल्लो भागमा राख्दा मासुमा भएका तरल पदार्थ र कीटाणु हावामार्फत तल्लो सतहमा झर्न सक्छ । अनि तल राखिएका अन्य खाना, पाकिसकेका परिकार, सागसब्जी, शाकाहारीका लागि तयार पारि छुट्ट्याइएका परिकार, फलफुल तथा तरकारीमा पर्न सक्ने खतरा हुन्छ । काँचो मासु र पाकेको मासु एकै स्थानमा राख्नु हुँदैन ।
दशैंमा खानाको मात्रा सबैका लागि एकनास भने हुँदैन । धेरै शारीरिक काम गर्नेले धेरै खानुपर्छ, थोरै काम गर्नेले थोरै खानुपर्छ । काम कम, माम धेरै गर्नुहुँदैन । शाकाहारी भोजन मुटुरोगका लागि फाइदाजनक हुन्छ । तर, नियन्त्रित रूपमा माछामासु खाएमा हानि हुँदैन । उच्च फाइबरयुक्त खानाले मुटुलाई फाइदा गर्छ । खानामा फाइबरको प्रमुख स्रोत गहुँ, गेडागुडी, हरियो सागपात नै हुन । अंकुरित गेडागुडी र ताजा तरकारी खानु अझ बढी लाभदायक हुन्छ । फापर, कोदो, जौ, मकै लगायतले पनि मुटुलाई फाइदा पुर्‍याउँछ । मासु खाएपनि हरियो सागपात र ताजा फलफूल पनि सन्तुलित रुपमा खानुपर्छ । सँगै, दसैंमा काम नगरी विभिन्न खेलमा रमेर बस्ने, तासको खाल वा टिभीमै मात्र केन्द्रित हुने लगायत अल्छी प्रवृत्ति पनि हुन्छ । त्यसले रोगीहरुको स्वास्थ्य झन बिग्रन्छ । सामान्य मानिसको पनि स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्छ । त्यसैले व्यायाम गर्ने, नियमित रुपमा हिँडडुल गर्ने र सक्रिय काममा सहभागी हुने गरेमा खाना पचाउन सहयोग पुग्छ नै शरीरमा स्फुर्ति पनि बढ्छ ।